UKUPHAKAMA OKUSEMGANGATHWENI KWECOUNTER, IBAR KUNYE NETAFILE - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Ukuphakama okusemgangathweni kweCounter, iBar kunye neTafile
Apha sinikezela ngesikhokelo sokuphakama okumiselweyo kwekhawuntari, ibha kunye nemilinganiselo yetafile.
Ke, kububulumko ukuqinisekisa ukuba wonke umntu owabelana kunye nochitha ixesha kwigumbi lokutyela ukhululekile kwaye akonwabeli ukutya okumnandi kuphela; kodwa uyonwabele nakwimeko yegumbi.
Xa ucwangcisa indawo yakho yekhitshi kunye neendawo zokutyela, kubaluleke kakhulu ukuba uqwalasele iindawo eziphakamileyo zetafile ukuze wenze esona sigqibo silungileyo kwaye ukhululeke ngokwaneleyo ukonwabele ukutya kwakho nabahlobo kunye nosapho.
Zintathu izinto eziphakamileyo zetafile ezithandwayo ezihlala zifuna uyilo lwangaphakathi. Le yitafile yokutyela, ukuphakama kwekhawuntari kunye nokuphakama kwebar. Apha sigubungela nganye nganye ngokulandelelana.
Ukuphakama kwetafile esemgangathweni
Ukuphakama okuthe tye
Ukuphakama kwebha esemgangathweni
Ukukhetha ukhetho olufanelekileyo
Yintoni ukuphakama okusemgangathweni kwetafile yegumbi lokutyela?
Ukufumana uSihlalo oGqibeleleyo kunye nokuphakama kwesitulo
Ukulinganisa ubude boSihlalo oLungileyo kwiTheyibhile yakho
Izithuba eziphakathi kweTafile kunye noSihlalo
Izixhobo zekhitshi lokuphamba kunye nobukhulu
Ukuphakama kwefanitshala yangaphandle
Ukuphakama kwetafile ekumgangatho ophakamileyo ukusuka kuma-intshi angama-28 ukuya kwangama-30 emhlabeni kwaye ke jonga izitulo zokutyela ukuphakama kwesihlalo phakathi kwee-intshi ezingama-18 ukuya kwezingama-20.
Ukuphakama koMgangatho oPhezulu kwiitafile 28 ″ - 30 ″ (29 Common ziqheleke kakhulu)
Ukuphakama kwesihlalo esiqhelekileyo kwizitulo 18 ″ - 20 ″
Iitafile zokuphakama kwekhawuntala yasekhitshini zihlala zimalunga ne-34 ukuya kwi-intshi ye-36 ubude kwaye ziya kufuna izitulo ezinokuphakama kwesihlalo esiphakathi kwe-24 ukuya kwi-intshi ye-28.
Ukuphakama okusemgangathweni kweKhitshi ukuphakama 34 ″ - 36 ″ (36 ″ Kuqheleke kakhulu)
iikhabhathi zasekhitshini zakudala
Ukuphakama kwesihlalo esiqhelekileyo seBar Stools seKitchen Counter 24 ″ - 28 ″
Itafile yokuphakama kwebha ngokubanzi imalunga ne-40 ukuya kwi-42 yeesentimitha ukuphakama kuluhlu, ke unokufuna ukusebenzisa izitulo zebar okanye izitulo ezilinganisa i-intshi ezingama-29 ukuya kuma-32 ukusuka emhlabeni ukuya esihlalweni.
Ukuphakama kweeBhari 40 ″ - 42 ″
Ukuphakama kweBha kweZitulo 29 ″ - 32 ″
Kunyanzelekile ukuba wazi kwaye uqonde ukhetho lwakho ekuyileni ikhitshi lamaphupha kunye negumbi lokutyela ukuze ulungele indlela ophila ngayo, indlela okhetha ngayo ukulungiselela, ukupheka, ukutya ukutya kwakho, kunye nokonwabisa iindwendwe zakho. Umlinganiso ubaluleke kakhulu ekucwangcisweni kwendawo yangaphakathi, ukuba nolwazi lobungakanani obuqhelekileyo kunye nokuphakama kwekhawuntari, iitafile kunye nezitulo ziya kukunika imeko efanelekileyo yokuthuthuzela kunye nokuguquguquka ekhitshini nakwindawo yokutyela.
Ukuphakama kwetafile yokutya esemgangathweni kunye nezitulo zokuphakama ezisezingeni elifanelekileyo zezona zikhetho zithandwayo kakhulu kwindibano esondeleyo nesesikweni kuba wena kunye neendwendwe zakho ninokuhlala ixesha elide kunye neenyawo ezichaphazela umgangatho. Ukudibanisa kwitafile yokutya esemgangathweni kukuba kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo onokukhetha kuzo xa ujonga itafile kunye nosihlalo ogqibeleleyo. Ukongeza, inokuba ilungele isidlo sangokuhlwa sosapho kuba kulula ukulingana nabantu abongezelelekileyo ukuba kufuneka njalo. Ukuba unondwendwe okanye ilungu losapho kwisitulo esinamavili, ukuphakama kwetafile yokutyela esemgangathweni kunokufikeleleka ngokulula kuloo mntu ukuze ajoyine. Kuba ukuphakama kwesihlalo sokuphakama kumgangatho osezantsi, lukhetho olukhuselekileyo kubantwana abancinci.
Abanini bamakhaya abakonwabelayo ukonwabisa ngelixa bepheka ekhitshini, uhlobo olufana nokutya kulwakhiwo lwekhitshi luyakukhetha ukuba netafile yokuphakama kwekhitshi. Olu hlobo lwetheyibhile lunokusebenza njengendawo eyongezelelweyo yekhitshi yokulungiselela ukutya kwaye inokuphinda kabini njenge Isiqithi sasekhitshini . Ngaphaya koko, ukuba ufuna indawo eyongezelelweyo yomlenze yeyona ndlela iphambili kukuphakama kwetafile yekhitshi. Iya kuhlala ikhululekile ngakumbi ngakumbi kubanini bamakhaya abaphezulu okanye kwiindwendwe kwaye yenza ukuba kube lula ukujikeleza nabantu abema bejikeleze ikhitshi.
Amakhitshi amancinci banomda okanye abanasithuba sikhulu sokusebenza, kwaye ke ukuphakama kweetafile kukukhetha okufanelekileyo ngenxa yesayizi yazo encinci. Ngenxa yobungakanani beetafile zokuphakama kunye nokuphakama azithathwa njengetafile yokutyela ngokusesikweni kodwa zinokuba sisiqwenga semisebenzi ngexesha lemibhiyozo kuba iindwendwe zinokubeka iziselo zazo kunye neepleyiti ngelixa zisonwabisa kwaye zinokuhlala okanye zime malunga netafile kamnandi .
Ukukhetha ubungakanani besitulo okanye isitulo esifanelekileyo kwitafile yakho yokutya kubaluleke kakhulu. Kwakhankanywa ngaphambili ukuba ukuphakama kwesitulo esifanelekileyo kwezitulo zii-intshi ezingama-18 ukuya kwezingama-20 ukusuka phantsi ukuphakama komgangatho wetafile yokutya.
Ukufumana indawo yokuhlala ngokungaqhelekanga kunye nokuchaneka, ukukhetha ukusebenzisa izitulo kuya kuba yinto efanelekileyo ngakumbi ngakumbi kwitafile yekhawuntara yasekhitshini okanye kwitafile yebar. Ukuphakama kwesitulo esifanelekileyo kwisitulo sekhitshi esiphakathi kwe-24 ukuya kwi-intshi ezingama-28 ukuphakama; ngelixa ukuphakama kwesitulo sebar kuhlala kungama-intshi angama-29 ukuya kuma-32 ubude. Ukongezwa kobuhle kuyilo, sebenzisa iitafile zebar ezinde ukusuka kwii-intshi ezingama-44 ukuya kwezingama-47 kwaye uzidibanise nesitulo sebar ejikeleze i-33 ukuya kuma-36 intshi ubude.
Kodwa ukuba ufuna isitulo esinokuba sisibini esifanelekileyo kuzo naziphi na iindawo eziphakamileyo zetafile, zama ukuqwalasela izitulo eziphakamileyo ezinokuhlengahlengiswa.
Izipho zezikhumbuzo zeminyaka engama-60 zomtshato
Nazi ezinye iingcebiso malunga nendlela onokulinganisa ngayo ukuphakama kwesihlalo:
• Ukubala ukuphakama kwesitulo setafile yakho, kufuneka ulinganise ukusuka kumgangatho ukuya phezulu kwitafile yakho.
• Thabatha i-intshi ezili-10 ukuya kwezili-12 ukuphakama kwetafile yakho. Esi sesona sigunyaziso silungileyo ukuze ukwazi ukuhlala kamnandi naxa iwele imilenze. Cinga ngesithuba esongezelelweyo kubalo lwakho ngakumbi xa itheyibhile yakho ingaphezulu kobukhulu obuqhelekileyo.
• Kwimilinganiselo yokuphakama kwesitulo, linganisa ukusuka kwiinyawo zesihlalo ukuya phezulu esitulweni okanye kwisitulo. Xa ulinganisa ukuphakama kwesihlalo, qiniseka ukuba awubandakanyi ukuphakama kwesitulo sangasemva okanye isitulo.
Kuzo zonke iintlobo zeetafile- nokuba yitafile yokutya esemgangathweni, itafile yekhawuntara yekhitshi okanye itafile yokuphakama kwebha, qiniseka ukuba kukho isithuba esili-12 ukuya kweli-15 phakathi kwetafile kunye nesihlalo.
Ifaskoti yiphaneli yokuhombisa edibanisa umphezulu kunye nemilenze yetafile kwaye inike ukomelela kwesakhiwo kunye nenkxaso kwifenitshala; Indawo efanelekileyo phakathi kwezantsi yefaskoti kunye nesihlalo sesihlalo kufuneka ibengu-7.
Kwizitulo zengalo, kufanele ukuba okungenani kubekho ukucoca oku-7 phakathi kwesitulo sengalo nangaphantsi kwetafile yomhlaba okanye ezantsi kwefaskoti.
Qinisekisa ukuba kusoloko kukho indawo eyaneleyo phakathi kwezitulo okanye izitulo wena neendwendwe zakho ukuba nizokutya kamnandi ngaphandle kokugilana. Kuhlobo ngalunye lwetheyibhile, qiniseka ukuba kukho ubuncinci beesentimitha ezingama-26 ukuya kuma-30 zesithuba phakathi kweziko lesihlalo ngasinye ukulungiselela ukuhlala ngokukhululekileyo. Nasiphi na isitulo sokuphela okanye isitulo, vumela ubuncinci i-intshi ezili-14 ukusuka embindini wesihlalo sokuphela okanye isitulo eludongeni okanye esiphelweni setafile. Ngokwenza njalo, uya kuba nesithuba esaneleyo sokuhlala phantsi okanye ukuvuka ngaphandle kokungena endleleni yomnye umntu osecaleni kwakho.
Kubalulekile ukuqwalasela ububanzi besihlalo ngokulinganisa ukusuka kwelona ndawo libanzi lesihlalo. Umzekelo, izitulo okanye isitulo ezi-intshi ezili-16 ukuya kwezili-18 ububanzi, kufanele kubekho ii-intshi ezingama-21 ukuya kwezingama-22 phakathi kwamaziko ezitulo ezibini okanye isitulo. Izitulo kunye nezihlalo ezingama-intshi ezingama-19 ukuya kuma-22 ububanzi kufuneka zibe nee-intshi ezingama-24 ukuya kuma-25 phakathi kweziko lesihlalo ngasinye okanye isitulo. Abo baneendawo zokubeka iingalo, vumela ii-intshi ezi-8 ukuya kwezili-10 phakathi kwemiphetho.
Kukho izinto ezininzi ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha into efanelekileyo yokusetyenziselwa ikhitshi lakho. Izinto ezisetyenziswa kakhulu kwi-countertop ziyi-quartz, i-granite, i-marble kunye ne-laminate. Isixhobo ngasinye se-countertop sinenzuzo yaso ekuqwalaseleni ekuthatheni isigqibo sokuba yeyiphi eyona nto ilungileyo onokuyisebenzisa ekhitshini lakho.
I-countertop ye-Quartz iyona khetho ethandwa kakhulu ukuba ukhetha ilitye eliqinileyo. Ilitye leQuartz lineendlela ezahlukeneyo, ubungakanani kunye nombala onokukhetha kuwo. I-Quartz isitayile esihle kakhulu, ihlala ixesha elide kwaye kulula ukuyigcina. Imiphezulu yeetafile zeQuartz zineendidi ezintathu zokugqitywa - zipolishiwe, ubuso bamatye kunye neenkozo.
Imilinganiselo emithathu ye-quartz esetyenziselwa ukwenza i-countertop yi-1.2cm elingana ne-3/8, 2cm ilingana no-3/4 kunye ne-3cm ilingana no-1 ¼. Ngokwesiqhelo, i-1cm okanye i-1.2cm ye-quartz countertop isetyenziswa kwi-countertop esele yenziwe kunye nomphetho olaminethiweyo kwaye iphambi kokucoca. I-countertop ye-quartz eyenziwe ngaphambili ihlala inomzimba we-1cm kwaye ine-2cm. Kumzimba we-1.2cm, i-edge ine-thickness ye-2.4cm ngelixa i-2cm countertop yomzimba ine-4cm.
gcina imihla kunye nemifanekiso
Kwitafile yekhitshi, i-quartz engama-3cm eshinyeneyo isetyenziselwa ukufaka isicelo kumda wesiko onje nge-bullnose edge, i-half-bullnose, i-dupont, i-ogee edge enokwenza ikhitshi lakho lekhitshi libe nomtsalane ngakumbi; Kuba amakhitshi ahlala eyindawo ekugxilwe kuyo ekhayeni lakho.
I-Granite lukhetho oludumileyo kwabo bafuna itafile yelitye yendalo. Ngaphandle kokukwazi kwayo ukubambelela ngokuchasene nokusika kunye ne-dicing kunye neminye imisebenzi yasekhitshini, ilitye lenyengane lomelele kwaye likwangumelana nobushushu. Imiphezulu yeetafile kungamampunge ngokuqhelekileyo kufumaneka kwi-2cm okanye kwi-3cm ubukhulu kwaye iza nemibala eyahlukeneyo.
IMarble yaziwa ngenkangeleko yayo etsala amehlo kwaye amandla ayo amakhulu bubuhle bayo obunomtsalane kunye nobuhle obungapheliyo. I-Marble inokudibanisa kakuhle kunye nezinto ezahlukeneyo ezinjengezinyithi ezingenasici, ukhuni kunye neethayile. I-Marble ibonelela ngokusebenza okuhle ekhitshini lakho kwaye ibamba ubushushu ngcono ngenxa yokuqhuba kwayo okuphezulu kobushushu. Kwitafile yekhitshi, ubukhulu be-3cm yeyona nto ilungileyo bokusebenzisa kwaye inokunika abaninimzi ukhetho oluninzi lokuphrinta komphezulu wekhitshi.
Imiphezulu yeetafile ezinciphileyo nezikhanyayo ezinje nge-1cm ukuya kwi-1.3cm zilungele imiphezulu emi nkqo njengomphetho wempompo osetyenziswa kwiziqithi ezikhawuntarini yekhitshi. Kuba ibonelela ngokukhanya, yenza ukuba kube lula ukuba abayili bakhe izicelo ezizodwa ezinjengokubopha udonga, ikheshi yekheshi, kunye nezixhobo zokubala ezidadayo ngenkxaso yesiseko esincinci.
Indawo yetafile kunye nezihlalo zibaluleke kakhulu ukuba ziqwalaselwe ekudaleni indawo eyamkelekileyo kunye nendawo esebenzayo yokonwabisa. Le fenitshala yangaphandle ihlala iseta, njengokutya kunye neeseti zokuphumla. Itafile nganye, izitulo, izitulo kunye neesofa kufuneka zihambelane ngokufanelekileyo kwaye zilungelelanise zombini isitayile kunye nobungakanani ukuze zenze ukubukeka okumanyeneyo kunye nokufezekisa intuthuzelo nomsebenzi wefenitshala nganye.
Ubungakanani obuqhelekileyo befanitshala yangaphandle bufana kakhulu netafile yangaphakathi kunye nezihlalo eziphakamileyo; umahluko kuphela kwizinto ezisetyenziselwa ifanitshala.
Ukuphakama kwetafile yokutya yangaphandle kumgangatho zii-intshi ezingama-28 ukuya kwezingama-30. Izitulo zokutya kunye nezitulo ze-bistro ezine-intshi ezingama-18 ukuya kuma-26 ukuphakama zilungele ukudibana nolu hlobo lweetafile. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ukuphakama kwetafile yokutyela akuxhomekekanga kubungakanani betafile.
yenyuka igolide yokutshata iinwele
Ukuphakama kwetafile ukuphakama kuphakame kancinci kuneetafile zokutya eziqhelekileyo. Itafile yokuphakama kwekhawuntari ihlala ilinganisa ii-intshi ezingama-34 ukuya kuma-36 kwaye zinokudityaniswa nezitulo okanye izitulo ezinokuphakama kwesihlalo see-intshi ezingama-24 ukuya kuma-26. Iitafile zokuphakama zokubala, izitulo kunye nezihlalo zizinto ezintle ekukhetheni ukutya okungacwangciswanga kwaye zilungele ukonwabisa iindwendwe kwipatio.
Ngezinto ezingaqhelekanga Ukutyela ngaphandle , iitafile zokuphakama kwebha lukhetho oluthandwayo lwabayili, abayili kunye nabanini bamakhaya. Itheyibhile yokuphakama kwebha esemgangathweni zii-intshi ezingama-40 ukuya kwezingama-42 kwaye ilunge kakhulu ukuba idityaniswe nezitulo zokuphakama kwebha okanye izitulo zebar ezinokuphakama kwesihlalo see-intshi ezingama-28 ukuya kwezingama-30 ukonwaba ngaphandle.
I-Aluminium yeyona nto ixhaphakileyo yangaphandle yefanitshala kuba iyakwazi ukumelana nomhlwa kunye nokonakala komswakama. Yomelele kwaye ayisindi yenza ukuba ibe nokuphatheka kakhulu kwaye inokugcinwa ngokulula. Isinyithi kunye nentsimbi eyenziweyo kwelinye icala, zinzima ngokwaneleyo ukubamba imimoya enamandla kunye nezinye iimeko zemozulu.
Ifanitshala yangaphandle yesiko yenziwe ngezinto zokwenziwa ezinjengeplastiki kunye nezinto ezenziwe ngezinto zokwenziwa kwempahla. Ifenitshala e-wicker ye-resin eyenziweyo ikwanyanzeleka kwimozulu kwaye ihlala ixesha elide kuba ihlala yenziwe nge-PVC, inayiloni okanye i-polyethylene ephezulu.
Ukuziva ufudumele, unemfashini kwaye unqabile, ukhetho oluqhelekileyo yifenitshala yangaphandle eyenziwe ngomthi ngokuchasene nemozulu yendalo kunye nokuqina okufana nepine, umsedare, itiak kunye nomnga.
Xa uthenga iitafile kunye nezitulo zakho, soloko ugcina itheyiphu yokulinganisa ilungile kuba nokuba uninzi lweendawo eziphakamileyo zenziwe ngobude obuqhelekileyo kusabalulekile ukulinganisa ukuphakama ngqo okudingayo.
Ubuntu bethu njengomntu benziwa kwaye bukhule ngaphakathi kosapho lwethu kuba kulapho ufumana khona uthando kunye nokuqwalaselwa. Ngokwesiqhelo, incoko emnandi yenye yeendlela zokufumana imbeko nenkathalo enjalo; kwaye kuhlala kusenzeka etafileni isidlo sangokuhlwa. Kwaye ufuna ukuba ezo nkumbulo zibe zezona zilungileyo ukuba zikhunjuzwe.
Iinkumbulo ezimnandi zenziwa xa zihlanganiselwe iTafile
ubukhulu bekhabhinethi yefriji
camo zomtshato bands zakhe nezakhe
ke indlu yezitena
Ngaba uya kuba yibhokisi yam yesipho somtshakazi